Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi Lase-Australia | Inombolo Yeselula ye-AU | Imeyili Yamuva
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi lase-Australia
Izinombolo Zezingcingo Zebhizinisi lase-Australia
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Australia luhlanganisa lonke uhlu lwezinombolo zocingo lomuntu we-AU. Idathabheki yeMeyili yakamuva inezinombolo zocingo zebhizinisi ezingaphezu kwe-250,000 Australia ezivela kulo lonke elase-Australia. Lolu hlu lweselula luyangena futhi luhlanzekile. Ungasebenzisa lolu luhlu lwefoni lwase-Australia emkhankasweni wakho wokubiza amakhaza oku-inthanethi noma imikhankaso ye-sms.
Idathabheki Yokugcina Imeyili ingenye yomhlinzeki wohlu olukhulu lwefoni olwaziwayo e-Australia. Ungasebenzisa uhlu lwethu lokufunda okwenziwe kufoniwe kwiselula yakho okuholayo, ukuhola okuthengisayo noma imikhankaso yokubiza amakhaza. Uma udinga ukwakha uhlu lwakho lwezinombolo zocingo lomuntu othize noma othize we-AU ungakhuluma neqembu lethu. Ithimba lethu lizokusiza ukuthi wakhe noma yimuphi umuntu othize noma uhlu lwezingcingo zezwe.
Thenga i-Australia B2B Izinombolo Zenombolo
UHLU LWEZIMALI LOKUTHENGA I-AUSTRALIA
Uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-Australia, uhlobo oluthile lwedatha ukufinyelela izinhloso zakho zomkhankaso we-telemarketing ezinqunywe yizinto ezahlukahlukene, okubandakanya imakethe yakho eqondiswayo kanye nabamukeli bemakethi be-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nomkhankaso wokubiza amakhaza.
Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo e-Australia, kuyindlela esebenzayo kunazo zonke yebhizinisi, noma ngabe uhlela ama-aphoyintimenti, uhlinzeka ngolwazi, noma uthengisa ngqo ngocingo unenombolo yokuthola ulwazi oluqondile ukuqondisa amaklayenti ngamandla amakhulu.
Uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-Australia luqukethe ama-250,000 amarekhodi abuyekeziwe ohlu lwezinombolo zebhizinisi afinyelela ku- $ 900, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Bheka lezi zinto njengehlu lokukhetha kusuka database yethu, eqoqwe futhi yahlungwa izisebenzi zethu zocwaningo ezinesiqinisekiso esikhulu. Uhlu lwefoni yebhizinisi okuqondiwe ngalo luyeza nedatha ebalulekile ongayisebenzisa ukukhulisa imizamo yakho yokuhlwaya. Yonga isikhathi sokubiza amathemba ngenxa yomthombo ohleliwe novuselelwe wezinhlu zocingo zase-Australia.
Idathabheki Yokuposa Yamathuluzi yakamuva ingumthombo wohlu lokuhola lwebhizinisi, ungaqiniseka ukuthi i-database yefoni yase-Australia isesikhathini, inikezela ngemininingwane efanele ngamakhasimende wamanani ngentengo engabizi yohlu lwefoni yebhizinisi kodwa inganikeza imininingwane ephezulu kakhulu thuthukisa ukuthengisa kwakho kwe-B2B okungasebenzisa ibhizinisi lakho.
Uhlu lwebhizinisi lase-Australia Umbuzo nezimpendulo